disease outbreak – African Farming
Deadly bird flu on two more farms in SA
The occurrence of the highly pathogenic avian influenza (H5N8 virus) has been confirmed at two farms in Gauteng and Mpumalanga, bringing the number of infected farms in South Africa to four. According to a press release from the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, the state veterinarian has already placed …
Continue ReadingDeadly bird flu on two more farms in SA
Bird flu in Zim: be on high alert
The South African Poultry Association (SAPA) warned that South African chicken farmers should be very careful after the outbreak of the highly pathogenic bird flu in Zimbabwe. The warning was issued by Kevin Lovell, CEO of SAPA, after an outbreak of the virus at a commercial breeding farm in Zimbabwe.…
Continue ReadingBird flu in Zim: be on high alert
South Africa has now also closed its borders to poultry from Zimbabwe after an outbreak of deadly bird flu. Botswana and Mozambique have already imposed bans on poultry imports from Zimbabwe “South Africa immediately suspended all trade in live birds and poultry, meat, table eggs and other unprocessed poultry products…
Continue ReadingSouth Africa also imposes import ban of Zim poultry
Botswana bans imports of Zim poultry after avian flu outbreak
The Government of Botswana have announced a ban on all poultry products from Zimbabwe after an outbreak of the highly pathogenic avian flu. “As a result, the import of domesticated and wild birds, their products (meat, eggs, feathers etc.) and poultry feed from Zimbabwe is banned with immediate effect,” government…
Continue ReadingBotswana bans imports of Zim poultry after avian flu outbreak